theZOMI: [mrsorcerer:37949] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း
[mrsorcerer:37949] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] သူခိုးတို့၏ ဘဏ်တိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်ခြင်း
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာ ခြေရာခံစစ်ဆေးနိုင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့် အဂတိချစားမှုက ဆင်းရဲချမ်းသာမှုအား အံ့မခန်းဘွယ် ကွာဟကြီးထွားလာရခြင်းနှင့် အကန့်သတ် သီးခြားသတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းငယ်သော လူတန်းစားများအတွက်သာ ကြီးမားသော ငွေရေးကြေးရေးပိုင်ဆိုင် စီမံပိုင်ခွင့်အားမျက်နှာသာပေးခွင့်ပြု ထားလေ၏။
ထိုအချက်၂ချက်ကြောင့် ဆင်းရဲချွတ်ခြုံကျမှုပမာဏ တိုးမြင့်လာပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးသက်ရောက်စွာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော ဓနအင်အား ချိနဲ့ ချို့ယွင်းသွားရသည်ဟု The Financial Time က ရေးသားထောက်ပြပါသည်။
Although revenues from the export of natural gas and precious jades are the largest source of foreign income in Burma, there has been no revenue transparency under both the previous Than Shwe regime and the current Thein Sein regime. How the government receives, manages, or uses oil and gas revenues is not publicly disclosed, the role that military enterprises play in revenue management and use remains unaccountable, andatotal lack of benefit sharing is prolonging Burma's resource curse.( Asia Review)
According toaformer official of the state-owned Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), income from the sale of the Yadana gas never even enters Burma. The payments are disbursed by Thailand throughathird party to bank accounts in foreign countries such as Singapore, Dubai, and China. in 2009 that "Burma currently receives between $2 and $4 billionayear from its sales of natural gas to Thailand, but these funds are kept far from the country's public accounts.
အဆိုပါ ထောက်ပြသောအကြောင်းရာများထဲတွင် ထိမိဆုံးသော စကားလုံးမှာ" မြန်မာပြည် စစ်အာဏာရှင် အစိုးရမှ လူ့အခွင့်ရေးများအား မိမိ၏ တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ် ချိုးဖေါက်ယုံတင်မက သန်းထောင်ပေါင်းများစွာသော အမေ၇ိကန် ဒေါ်လာများအား လုံးလုံးလျားလျား ပြည်သူများမှ ဓားမြတိုက် လုယက် ကွယ်ဝှက်ထားသည်" ဟု ဆိုထားသည်။
"As well as violating their own citizens' human rights, Burma's
Gas and jade revenues in Burma are recorded at the 'official' exchange rate of6kyat: US$1 while the market exchange rate ranges from 800-1,000 kyat: US$1 under military regime rule for 20 years, leaving billions of dollars' worth of gas payments completely unaccounted for. Burma's top military generals have therefore hidden billions of gas export dollars since 1998 due to the dual exchange rate system in Burma according to US Treasury Control Department.
အဆိုပါ ငွေလဲလှယ်နုံန်းစည်းမျဉ်းအရ မြန်မာအာဏာပိုင် အုပ်စုအဖို့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိတိုင် ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ထုတ်လုပ်တင်ပို ရောင်းချသောဝင်ငွေမျာအား အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေ သန်းပေါင်း ၄ထောင်နီးပါးမှ သန်းပေါင်း ၅ ထောင် နီးပါအထိ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ ၉၉ ရာနုံန်းအား ခိုးဝှက် ခဲ့ကြသည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြသည်။ ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တခုတည်းမှပင် တင်ပို့သော နိုင်ငံတော်ပိုင် တန်ဘိုးဝင်ငွေ ပမာဏ ဘာဂျက်တခုတည်းပင်သည် မြန်မာပြည်အတွင်း ခလေးသူငယ် သန်း၃၀ အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၂ သောင်း ကျော်မက တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ထူထောင်ပေးလို့ရသည်ဟု Burma's Resource Curse ဟုခေါ်သော "မြန်မာ့ သံယံဇာတ ကြိမ်စာသင့်နေခြင်း" ဆိုသော စာတမ်းတွင် အတိကျ ထောက်ပြထားပါသည် ခင်ဗျာ။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/19/2013 07:43:00 AM